မူလနရော » Fukuoka-city
Updated: 2016-10-21 15:19
AMU ပလာဇာ ဟကတ
AMU ပလာဇာ ဟကတဟာ ဟကတမြို့ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစင်တာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုခရုးဟန်းနှင့် အခြားနာမည်ကြီးဆိုင်များ၊ခူးတင်းလို့ခေါ်တဲ့ လျှာကဝေစေမယ့်စားသောက်ဆိုင်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့် အခွန်မဲ့စတိုးမျ...
Updated: 2016-09-29 16:27
( ဟာကတ မာ့ချိရ ) ဖုရုစတို ကန်
(ဟာကတ မာ့ချိရ)ဖုရုစတို ကန် အဆောက် အဦး ဟာ ၊ မဲဂျိ ခောတ် မိဥူရ ဆို တဲ့ လူ က ပိုင်ဆိုင်တာ ဖြစ်ပြီး ၊ ၁၉၉၄ ခု နှစ် မှာ ပြန်လည် မွမ်းမံတည်ဆောက် ခဲ့ တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖုခုအိုက မြို့ ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆော...
Updated: 2016-09-01 13:41
အဆင့်မြင့် ရှေ့ပင်းစင်တာ LOFT နဲ့ Animega
ဘွန်းခရော ဒို နဲ့ အန်းနီးမဲဂ ကတော့ တဲန်းဂျင်း Loft ရှော့ပင်း စင်တာ ရဲ့ ၇ လွှာမှာ တည်ရှိပါတယ်။ အတော်ကျယ် တဲ့ အရောင်း ဈေး ကြီး ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းပစ္စယ များ လဲ စုံ လင် တဲ့ ဆိုင် တစ် ဆိုင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်း...
ဟကတဘူတာအနီးရှိ ဂျပန်စတိုင်အပန်းဖြေပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။ ရှော၀၃၅နှစ်မြောက်တွင်ဟကတရှိကုန်သည်တစ်ဦးကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအခါမှ ဂျပန်စတိုင်ဟိုတယ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ဟဲဆဲ၇နှစ်တွင်ဖုခုအိုကမြို့...